Tobankii ruux ee adduunka ku dhimata mid ka mid ah ayaa sigaar eersaday - BBC News Somali
Image caption Indunuusiya ayaa ka mid ah dalalka la daalaa dhacaya in ay dhimaan sigaar cabidda
Tobankii ruux ee adduunka ku dhimataba mid ka mid ah ayuu sigaar dilaa sida ay muujinayso cilmi baaris cusub oo la sameeyay, kala bar dhimashadaasina waxay ka dhacdaa afar dal oo kala ah Shiinaha, Hindiya, Maraykanka iyo Ruushka.
Inkastoo sanado badan la soo waday siyaasado lagu xakamaynayo tubaakada, haddana tirada dadka ee sii kordhaysa ayaa sababtay in ay sare u kacaan dadka sigaarka caba, sida warbixintan ay ka digayso.
Cilmi baareyaaashu waxay sheegeen in ay macquul tahay in dhimashadu ay sare u kacdo maadaama oo shirkaduhadaha Tubaakadu ay si wayn isugu dhabar jabinayaan in ay helaan suuqyo cusub, gaar ahaan dalalka soo koraya.
Cilmi baaristan waxaa daabacay jariiradda arrimaha caafimaadka ee The Lancet.
Dr Emmanuela Gakidou oo ka mid ah soosaareyaasha sare ee cilmi baaristan ayaa sheegay in inkastoo nus qarnigii u dambeeyay cadaymo ku filan loo hayay in tubaakadu ay caafimaadka u daran tahay, haddana afartii rag ah ee dunida joogaba mid ka mid ah ayaa sigaaryo cab ah.
Sigaar cabidda ayaa wali ah shayga labaad ee dadka ku haya halista ah in ay durba dhintaan ama naafoobaan, si arrintaas loo yareeyana waa in wax laga qabto oo laxakameeyo tubaakada, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Dr Emmanuela.
Hay'adda cilmi baarista caafimaadka samaysa ee magaceeda loo soo gaabiyo GBD ayaa warbixinteeda ku salaysay habdhaqanka sigaar cabidda ee 195 dalal iyo deegaanno, baaritaankaas ayaana la sameeyay intii u dhaxaysay 1990kii ilaa 2015kii.
Sacuudiga oo baaraya muuqaal muujinaya tacadi lagula kacay ilmo yar
Hay'addu waxay ogaatay in ku dhawaad hal bilyan oo ruux ay sigaar cabayeen maalin kaste sandkii 2015kii, taas oo ka dhigan afartii rag ahba uu midi sigaar cabo, 20kii dumar ahna ay midi sigaar cabto.
Canshuurta sare loo qaaday
Arrintan ayaa hoos u dhac ah marka loo eego 1990kii markaas oo ay saddexdii rag ahba uu midi sigaaryo cab ahaa, 12kii gabdhoodna ay midi sigaarka cabi jirtay
Si kastaba ha ahaatee, tirada bulshada oo korortay ayaa ka dhigan in ay sare u kaceen guud ahaan dadka sigaarka caba iyadoo 870 milyan oo ruux ay sigaarka cabi jireen 1990kii.
Tirada dadkii ay tubaakadu dishay sanadkii 2015kii ayaa ahayd in kabadan 6.4 milyan taas oo ka dhigan sare u kac gaaraya 4.7%.
Cilmi baaristan waxaa lagu ogaaday in dalalka qaar ay ka guulgaareen dadaaladii ay u galeen in dadkoodu ay iska joojiyaan sigaar cabidda, badankooduna xeeladaha ay adeegsadeen waxay ahayd in ay isku dareen canshuurta sigaarka oo ay sare u qaadeen, baakadaha sigaarka oo digniin lagu qoray iyo barnaamijyo waxbarasho ah oo ay sameeyeen.
Muddo 25 sano ah ragga reer Brazil ee sigaarka caba maalinkaste waxay hoos u ugu soo dhaceen 12% halkii ay ka ahaayeen 29%, dumarkuna waxay hoos ugu soo dhaceen 8% halkii ay ka ahaayeen 19%
Laakiin warbixintu waxay sheegtay in Bangladesh, Indonesia iyo Philippines aysan wax isbadal ah samaynin tan iyo 1990 ilaa 2015kii.
Isla wakhtigaas dumarka dalka Ruushka ee sigaarka caba ayaa sare u kacay 4%, soo saareyaasha cilmi baaaristanna waxay ka digayaan in Afrika ay ka muuqato ifafaalo taas la mid ah.